မြန်မာပြည်ကနေတစ်ယောက်တည်းလာနေရတဲ့ ချွေးမလေးရဲ့မွေးန့လေးကို အံ့သြပျော်ရွှင်သွားအောင်ဖန်တီးပေးလိုက်တဲ့ ချမ်းချမ်းရဲ့ယောက္ခမ – Cele Snap
မနေ့ကတော့ အဆိုတော် ချမ်းချမ်းရဲ့ မွေးနေ့ ဖြစ်ပါ တယ်နော်။ ချမ်းချမ်းကတော့ သူမရဲ့မွေးနေ့ကို ယောက္ခမတွေနဲ့အတူ ပျော်ရွှင်စွာ ကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်နော်။ သူမအရမ်းလိုချင်နေတဲ့ အပ်ချုပ်စက်လေးကို မွေးနေ့ လက်ဆောင်အဖြစ် ယောက္ခမဖြစ်သူမှ ပေးခဲ့တဲ့အတွက် ချမ်းချမ်းတစ်ယောက် အရမ်းကို ပျော်ရွှင်သွားခဲ့ပါတယ်နော်။
ပြည်ပမှာ မိဝေးဖဝေး တစ်ယောက်တည်း လာနေရတဲ့ ချွေးမလေးကို ပျော်အောင် လုပ်ပေးတဲ့ မိသားစုလေးပါပဲနော်။ ချမ်းချမ်းကလည်း ” Happy Birthday To Me! ☺️😍14.Sep.1987ဒီနေ့ဟာ ကျွန်မ ချမ်းချမ်းရဲ့၃၄ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိတ်သတ်ကြီးရေ ဘဝဆိုတာနေတတ်ရင် ကျေနပ်စရာပါနော် အခုချိန် ကျွန်မ ချစ်ရတဲ့ သမီးနှစ်ယောက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ မိခင် တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်နေပါပြီ☺️😊
ကျွန်မ ချစ်ရတဲ့ မိသားစုရယ်ချစ်ရတဲ့ ပရိတ်သတ်တွေနဲ့ကျွန်မ ချစ်ရတဲ့ သီချင်းတွေကို ဖန်တီးရင်းပျော်ရွင်အေးချမ်းတဲ့ ဘဝလေးကို ဖြတ်သန်းရဖို့ပဲဆုတောင်းမိပါတယ် 🙏မြန်မာပြည်ကြီးလည်း အမြန်ဆုံး ငြိမ်းချမ်းပါစေလို့ ဒီကနေ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ် 🙏🙏🙏Birthday Wish ကြိုပြီး လုပ်ပေးကြတဲ့ပရိတ်သတ်တွေရော ပရိတ်သတ်တစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်းတွေ အားလုံးကို ချမ်းချမ်းက ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ် 😍😍” လို့ ရေးသားထားပါသေးတယ်နော်။
မနကေ့တော့ အဆိုတျော ခမျြးခမျြးရဲ့ မှေးနေ့ ဖွဈပါ တယျနျော။ ခမျြးခမျြးကတော့ သူမရဲ့မှေးနကေို့ ယောက်ခမတှနေဲ့အတူ ပြျောရှငျစှာ ကငျြးပခဲ့ကွပါတယျနျော။ သူမအရမျးလိုခငျြနတေဲ့ အပျခြုပျစကျလေးကို မှေးနေ့ လကျဆောငျအဖွဈ ယောက်ခမဖွဈသူမှ ပေးခဲ့တဲ့အတှကျ ခမျြးခမျြးတဈယောကျ အရမျးကို ပြျောရှငျသှားခဲ့ပါတယျနျော။
ပွညျပမှာ မိဝေးဖဝေး တဈယောကျတညျး လာနရေတဲ့ ခြှေးမလေးကို ပြျောအောငျ လုပျပေးတဲ့ မိသားစုလေးပါပဲနျော။ ခမျြးခမျြးကလညျး ” Happy Birthday To Me! ☺️😍14.Sep.1987ဒီနဟေ့ာ ကြှနျမ ခမျြးခမျြးရဲ့၃၄ နှဈပွညျ့ မှေးနပေဲ့ ဖွဈပါတယျ။ ပရိတျသတျကွီးရေ ဘဝဆိုတာနတေတျရငျ ကနြေပျစရာပါနျော အခုခြိနျ ကြှနျမ ခဈြရတဲ့ သမီးနှဈယောကျကိုပိုငျဆိုငျထားတဲ့ မိခငျ တဈယောကျလညျး ဖွဈနပေါပွီ☺️😊
ကြှနျမ ခဈြရတဲ့ မိသားစုရယျခဈြရတဲ့ ပရိတျသတျတှနေဲ့ကြှနျမ ခဈြရတဲ့ သီခငျြးတှကေို ဖနျတီးရငျးပြျောရှငျအေးခမျြးတဲ့ ဘဝလေးကို ဖွတျသနျးရဖို့ပဲဆုတောငျးမိပါတယျ 🙏မွနျမာပွညျကွီးလညျး အမွနျဆုံး ငွိမျးခမျြးပါစလေို့ ဒီကနေ ဆုတောငျးလိုကျပါတယျ 🙏🙏🙏Birthday Wish ကွိုပွီး လုပျပေးကွတဲ့ပရိတျသတျတှရေော ပရိတျသတျတဈယောကျခငျြးစီတိုငျးတှေ အားလုံးကို ခမျြးခမျြးက ကြေးဇူးအထူးတငျပါတယျ 😍😍” လို့ ရေးသားထားပါသေးတယျနျော။